Duufaanada Hafiyay Maraykanka Oo Sababay Inay Maraakiibta Iyo Libaax Badeedku Shaaracyada Magaalooyinka Oo Bad Isu Bedelay Kusoo Caaryaan – Araweelo News Network (Archive)
New york(ANN)Duufaano waaweyn ayaa hafiyay Dalka mareykanka, kuwaas oo saameyn ku yeeshay nolosha shacabka mareykanka. kadib markii ay duufaanka iyo dabaylaha xawaaraha ku soconayaa maalmo ka hor waxyeelo ka geysteen dalalka Cuba iyo Haiti.
Duufaanka ayaa shalay Subixii iyo Caawa sii socota, ayaa sababay cabsi weyn, waxaana ka qaxay guryohooda In ka badan 700.000 oo Qoys, kuwaas oo ka hayaamay Aqaladoodii, iyadoo ay dadkaasi u qaxeen Gobolo kale oo fog fog. sidoo kale Dad lagu qiyaasay 54, Million oo American ah, ayaa laga cabsi qabaa inay ka qaxaan Magaalooyinka laga dhibaatadu iyo masiibooyinka duufaantu haleeshay, kuwaas oo ay ka mid yihiin Caasimadda Maraykanka Washington DC, Newyork Iyo Philadelphia iyo Waliba Gobolada Bariga xiga ee Wabiga Michigan iyo Badda Ocean ay maraan, sida Maryland, Boston Atlanta.
Duufaanta (Hurricane Sandy), waxay inta badan siddaa Biyo aad u xoog badan, Meelaha ugu daran ee laga Qaxay waa South Carolina iyo Cape May oo ka tirsan New Jersey una jirta magaalada New York City 200 oo KM. Shaqaalaha Dawlada iyo Caruurtii Iskuulaadka magaalooyiinka Washington iyo Philadelphia ayaa gebi ahaanba la fasaxay.
Wadooyinka ugu caansan dalka Mareeykanka ee isku xidha Gobolada dalkaas waa Buundooyinka lagu magacaabo Holland iyo Brooklyn-Battery waxayna xidhan yihiin maalintii labaad. Magaalada Newyork iyo Washington DC. Waxaa la xidhay dhammaan Gaadiidkii Dadweynuhu raaci jiray, sida Basaska iyo Tareennada, waxaana Xaafadaha Wabiyada iyo Badaha u dhow laga qaxiyey Dadweynihii ku noolaa.
In ka badan 7.400 oo duulimaadyo Diyaarado ka imaan lahaa dunida oo dhan iyo kuwii ka duuli lahaa dalka Maraykanka ayaa ilaa amar dambe dib loo dhigay. Xawaararaha Duufaanta Hurricane Sandy ayaa lagu qiyaasay inay saacadii ku socon karto 44-Km.
Waxaa ka socda dalka Maraykanka isku gurmasho, waa Gobalka Minnesota laga diray, Boqolaal ciidamada la dagaalama Dabka kadib markii dab kadhashay Korontada oo Biyaha dhexgashay, taas oo laga cabsi qabo inay sababto halis ah in Biyuhu noqdaan Koronto Dadka ku dhagta. Waxaa Xaafado badan laga jaray Laydhka baqdin laga qabo in Dab kadhasho, ama Biyaha la isticmaalayo ay Koronto isku badalaan iyo kuwa lagu dhex soconayo.
Duqa magaalada New York ayaa iclaamiyay in lakala diray shaqaalaha xarunta Q.Midoobe sidoo kale wuxuu sheegay in qeybo badan oo magaalada katirsan ay ka jarmeen korontadii iyo biyihii kadib markii ay duufaantu ciladaysay adeegyadaasi, isla markaana laga baqay in khasaare intaa ka badan ka dhasho.
Magaalooyinka waaweyn ee dalka mareykanka, ayaa isu bedelay Bad, iyadoo ay kusoo caaryeen magaalooyinka Maraakiibta Bada maraysay iyo kuwo ku xidhnaa marsooyinka magaalooyinka qaarkood. sidoo kale waxa guryaha iyo shaaracyada Biyihu ka dhigeen bada lagu arkayaa libaax badeed ay duufaantu soo qaaday oo wadooyinka yaal, waxaana suurta gal noqon weyday in dab damisku adeegsadaan baabuurta dab damiska, taas oo ku khasabtay inay doonyo ku dhexmaraan biyaha iyo dabka is haysta.
Warbaahinta aduunka ayaa qaarkood soo bandhigeen sawiro iyo muuqaalo muujinaya dabka holcaya iyo roobka dusha ka haya ee aan baqtiinayan dabka, taas oo la yaab noqotay. waxaana jira burbur iyo khasaare xoogan oo ka dhashay masiibadaa, kaas oo 27 sanadood kadib dhaqaalaha mareykanka ku habsaday.